Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Muwaadin Soomaali ah oo ka mid noqday Xukuumada Boqortooyadda Gabula ee Dalka Uganda oo loo hanjabay.
August 22 2017 00:52:09
Muwaadin Soomaali ah oo ka mid noqday Xukuumada Boqortooyadda Gabula ee Dalka Uganda oo loo hanjabay.
Wargeyska The Monitor, ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa qoray in Muwaadin Soomaali ah oo kamid noqday Xukuumada Boqortooyo Dhaqameedka Gabula ee dalka Uganda uu lakulmay Hanjabaadyo badan.
Madaxa Boqortooyada Gahula , Edward Columbus Wambuziga , ayaa soo dhisay Golle wasiiro uu yeelanayo Xukuumada Boqortooyadiisa, waxa uuna soo magacaabay 34-xubnood , waxaana xubnaha uu magacaabay ku jira Muwaadin Soomaali ah balse heesta dhalashada dalka Uganda.
Edward Columbus Wambuziga , ayaa Ra'isul Wasaaraha Boqrtotadiisa waxa uu u magacaabay Dr. Joseph Muvawala, halka kuxigeenkiisa koowaad loo magacaabay Dr. Maxamed Lubega Kisambira, waxaana Ra'isul Wasaare kuxigeenka labaad loo magcaabao Osman Axmed Nuur oo ah Muwaadin Soomaali ah balse heesta dhalashada dalka Uganda.
Muwaadinkan Soomaaliyeed oo degan Dalka Uganda, ayaa durba waxa uu xanjabaadyo badan kala kulmay dad badan oo Ugandhees ,kuwaa oo ugu hanjabay in ay gubi doonaan guryaha iyo ganacsi uu leeyahay.
Boqorka Gabula ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu gu baaqay taageerayaashiisa in ay taageeraan soona dhaweenayaan xukuumada uu dhisay, waxa uuna uga digay in ay kala hor yimaadaan xukuumadan dagaal iyo mucaaradad.
Ciidamo booliis ah oo aad u badan ayaa la geeyay deegaanka Kaliro halkaas oo la sheegay in Muwaadinkan Soomaaliyeed uu ku leeyahay guryo iyo Hanti , waxa ayna booliiska ilaalin doonaan hantida uu leeyahay Muwadainkan Soomaaliyeed ee kamid noqday Xukuumada boqrtooyada Gabula.
· mamaan on April 25 2016 ·